UTİKAD İkinci Kez Ekonomi ve Lojistiğin Zirvesinde – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulUTİKAD shirkii dhaqaalaha iyo sahayda ee mar labaad
07 / 04 / 2017 34 Istanbul, tareenka, GUUD, TURKEY
UTİKAD Shirweynihii Dhaqaalaha iyo Saadka ee Markii Labaad: Shirka Dhaqaalaha iyo Saadka, oo ay soo qabanqaabisay UTA Logistics Magazine markii labaad ee sanadkan, ayaa ka dhacay Abril 5 Hotel ee Bomonti Hotel. Shirweynahan, oo ay taageereen oo ay taageereen UTİKAD, Ururka Soo Saarayaasha Gaadiidka Caalamiga iyo Adeegga Saadka, magacyada hormuudka u ah waaxda dhaqaalaha iyo saadka ayaa isugu yimid.
Kulankan oo ah meeshii Emre Eldener, oo ah gudoomiyaha gudiga agaasimeyaasha UTİKAD, isla mar ahaantaasna uu dhexdhexaadiyay kalfadhiga ugu weyn, ayaa waxaa laga wada hadlay dhibaatooyinka qaybta logistics iyo rajada laga qabo waaxaha dhabta ah ee saadka. Emre Eldener, Madaxweynaha UTİKAD, wuxuu taabtay horumarkiisa 2016 khudbadiisa, erek Waxaan saadaalinaynaa in 2017 ay sanad adag u noqon doonto qaybta aruurinta bixinta adeegyada adeegyada saadka, waxaanan kugula talineynaa in dhammaan xirfadleyda saadka ay maareeyaan qatarta ay si sax ah u yeeshaan una horumariyaan moodooyinka ganacsi ee waara ”.
Dhamaadkii shirweynihii, oo ay ku shireen wakiilo sar sare oo wakiilo ka kala socda bulshada, ururada aan dawliga ahayn iyo waaxaha, xubno badan oo UTİKAD ayaa la guddoonsiiyay.
UTİKAD, Ururka Soosaarayaasha Adeegga Gaadiidka iyo Saadka ee Caalamiga ah, ayaa la kulmay magacyada hormuudka u ah dhaqaalaha iyo waaxda logistics ee Shirweynaha Dhaqaalaha iyo Saadka ee uu qabtay UTA Logistics Magazine markii labaad sannadkan. Iyada oo la kaashanayo Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta, Wasaaradda Dhaqaalaha, ururada waaxaha iyo ururada, 5 waxaa lagu qabtay Hilton Istanbul Bomonti Hotel bishii Abriil .. Shirka ayaa lagu bilaabay khudbadaha furitaanka ee Tifaftiraha Guud ee Majaladda Saadka ee UTA Cem Kaçmaz iyo Guddoomiyaha UTİKAD Emre Eldener. . Kulankii ugu horreeyay ee ugu weyn ee Eldener waxaa dhexdhexaadiyey Turgut Erkeskin, kuxigeenka madaxa guddiga UTİKAD iyo guddiga ganacsiga ee loo yaqaan 'DEİK Logistics Council', iyo Kosta Sandalcı, gudoomiyihii hore ee UTİKAD, İbrahim Dölen, xubin ka mid ah guddiga agaasimeyaasha ee UTİKAD iyo TÜRKLİM.
Khudbaddii furitaanka shirweynahan oo lagu abaabulay hal-ku-dhigga hal-abuurka ee 'G Loglü Logistics' ee loogu talagalay UTİKAD, Emre Eldener, oo ah Guddoomiyaha Gudiga Agaasimayaasha ee UTİKAD, oo qiimeyn guud ka sameeyay waaxda logistics ee Turkiga, ayaa soo jiitay muddadii adkeyd ee ay jirtay qaybta 2016 wuxuuna hoosta ka xariiqay isbeddelka iyo horumarka inuu la soo kulmayo Warshadaha 4.0.
Emre Eldener, gudoomiyaha UTİKAD, wuxuu carrabka ku adkeeyay in isdhaafsiga fikradaha iyo isfahamka labada dhinac ay faa iido weyn u tahay dhammaan saamileeyda ku hoos jira Sumcadda Dhaqaalaha iyo Saadka halkaasoo wakiilo ka socda dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ay isugu yimaadaan heer heersare ah. “Awoodda ururada aan dowliga ahayn, kuwaas oo lama huraan u ah nolosha bulshada, nolosha dhaqaalaha. iyo sida ugu wax ku oolsan ee loo adeegsado mas'uuliyadda bulshada, faa'iidooyinka shaqsiyadeed iyo kan bulshada labadaba. Ururka adduunka ganacsiga wuxuu ogolyahay ururinta dhibaatooyinka guud ee shirkadaha soo saarta adeegyada isla waaxda, soosaarista xalal maskaxda iyo wadaaga xalkaas shacabka. Waxay waddada u xaareysaa horumarka iyo xasilloonida kaabayaasha iyo qarankaba.
UTİKAD waxay sii wadataa waxtarka
UTIKAD sida matalaya Turkey logistics qaybaha iyo xubnaha ay sida ugu wanaagsan ee heerarka qaran iyo kuwa caalamiga ah, inay ka qayb qaataan heerarka caalamiga ah ganacsatada iyo koboc dhaqaale, Gudoomiyaha horumarinta xubnaha ururka UTIKAD sheegaya in ay sii waday in ay ka shaqeeyaan si ay u fuliyaan hawlaha lagu taageerayo Eldener, "UTIKAD sannadkii hore 30. sanadka. Turkey iyo kuwa caalamiga ah sida dhulka, hawada, badda, tareenka, gaadiidka la isu geeyey, taas oo ka badan kun more 50 424 saara bixiyaha adeegyada saadka ka shaqeeya, waxaan u noqday urur aan dawli ahayn in ururiyaa ka yar saqafka la mid ah. Xubnahayaga waxaa ka mid ah dekedo, diyaarado iyo bakhaarro. ”
Isagoo sheegay in kororka lagu arkay qaybta saadka tan iyo 2011, ayuu yiri Eldener, yazık Nasiib darro, suurta gal uma aheyn in la gaaro xaddigii la beegsanayay sanadihii 2015 iyo 2016. Waxaan rajeyneynay inaan ka gudubno saameynta 2015 ee 2016. Si kastaba ha noqotee, labadaba xaaladaha aan caadiga ahayn ee waddankeenna iyo qalalaasaha siyaasadeed ee gobollada ku xeeran ayaa suurtogal ka dhigay inaan gaarno yoolalkayaga 2016. ”
WAQTIGEENA MUHIIMKA ISKU-XIDHKA EE LUUQADAHA
Si kastaba ha noqotee, Madaxweynaha UTİKAD wuxuu caddeeyey inay ku rajo weyn yihiin bartilmaameedka 2017 wuxuuna yidhi, başında Xaqiijinta isku-duwidda wasaaradaha waa bilowga baahiyaha waaxda. Tusaale ahaan, markaan nidhaahno xarumaha saadka; Wasaaradaha Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, Dhaqaalaha, Kastamka iyo Ganacsiga waa in si buuxda looga wada hadlayaa. Sidaa darteed, waxaa jiri kara xoogaa daahitaan howlaha. Isuduwidda saadka ayaa muhiimad weyn leh maalmahan markii waaxdeenna loo tixgaliyo inay tahay ahmiyada koowaad gaar ahaan qorshaha horumarinta. ”
XUQUUQAHA AYUU KU SAMEEYAA HALKAN
Eldener wuxuu tilmaamay in arrimaha ugu muhiimsan ee waaxda ay kamid yihiin dhibaatooyinka kastamada Ümr Arimaha la xiriira kastamku waxay quseeyaan dhamaan qeybaha waaxdayada. Waxaan leenahay dhibaatooyin aan fileynay in la xallin doono, sida u wareegista nidaamka daaqadda Single, dhameystirka hannaanka dheellitirka iyo hubinta is-dhexgalka bulshada ee geedi socodka saadka. Waxaan filaynaa in la dhaqangaliyo Sharciga Kastamka cusub bilaha soo socda si loo abuuro jawi shaqo oo wax soo saar leh. Waxaan sidoo kale rajeyneynaa in cusboonaysiinta Midowga Kastamyada EU-da ay keeni doonto gargaar, gaar ahaan adeegyada waddooyinka Yurub. ”
Eldener ayaa sidoo kale xusay shaqooyinka la xiriira xorriyadda wadooyinka tareenka. Şebeke Sanadkan, meeleyn shabakad ayaa la sameyn doonaa. 2018, qaybta gaarka loo leeyahay ayaa si wax ku ool ah u bilaabi doonta gaadiidka tareenka. Si kastaba ha noqotee, awooddeenna xamuul ee xamuulka qaada ee hadda jira weli isma beddelin, qaar ka mid ah dib-u-hagaajinno ayaa lagu sameeyay khadadka, laakiin ma lahan khaddo cusub. Tani waxay sababi kartaa dhibaato xaga awooda mustaqbalka dhow
E-TRADE FOCUS GROUP wuxuu sii wadaa shaqadiisa
Madaxweynaha UTİKAD wuxuu carrabka ku adkeeyay in taageerada la siinayo waaxda logistics-ka ee 2017 iyo diyaarinta diyaar garowga loogu talagalay u wareejinta garoonka diyaaradaha cusub marka loo eego labadaba kaabayaasha dhaqaalaha iyo sharciga ayaa noqon doona safka hore ee qaybta. Madaxweynaha UTİKAD wuxuu yiri “Soosaarista adeegsiga teknolojiyadda iyo tirakoobka waxay u abuuri doontaa fursad wanaagsan xubnaheena iyo Waxaan sii wadi doonnaa inaan gacan ka geysanno horumarinta shaqadeena iyo aragtideena iyada oo la jaan qaada qaabab cusub oo ganacsi loo sameeyo mustaqbalka. Maanta, waxaan ka wada hadli doonaa saameynta dhawaanahan laga hadlay ee ku saabsan warshadaha 4.0 qeybta saadka. Waxaan jeclaan lahaa inaan kuu soo jiito dareenkaaga xaqiiqada ah in maanta, shaqaale kasta oo 100 ah oo Kuuriya adeegsanaya robotska 4 ee wax soo saarka iyo saamigaan si joogto ah u kordhayo. Jarmalka gudaheeda, qiimaha saacaddii ee shaqaalaha warshaddu waa 40 Euro, halka qiimaha saacadlaha ah ee robotku yahay qiyaastii 5 Euro, oo ka kharash yar xitaa xitaa shaqaalaha Shiinaha. Marka sanadaha soo socda adduunka
Waxaan fileynaa isbeddelo waa weyn sida ay u ganacsadaan, xaqiiqdi maahan inaan seegno tareenkan. Anaga oo tixgalineyna xaaladaha isbedelaya ee waaxda iyo baahida shirkadaha ganacsiga, waxaan aasaasnay ​​koox diiradda saareysa Sahaminta e-Commerce ee UTİKAD waxaanna bilownay inaan la shaqeyno xubnaheena iyo daneeyayaasha kale ee ka shaqeeya arrintan. ”
OGEYSIIS loogu talagalay 2017 SANO
Baahida loo qabo Ener Logistics ee qeybaha kaladuwan laga bilaabo gawaarida iyo cuntada, min tafaariiqda ilaa ganacsiga ayaa sidoo kale looga doodi doonaa kalfadhiyada is barbar socda maanta. Waxaan rajeynayaa in caawa aan dhamaanteena kusoo laabano guryaheena oo leh aragti ballaaran. Intaas waxaa sii dheer, waxaan fileynaa inay noqon doonto sanad adag taxadarka qeybta aruurinta qodobbada adeegyada saadka ee la siiyo macaamiisha waxaanan kugula talineynaa in dhammaan xirfadleyda saadka ay maareeyaan halista ay si sax ah u yeeshaan una horumariyaan moodooyinka ganacsi ee waara.
Ku-Xigeenka Isuduwaha Wasaaradda Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta Orhan Birdal, oo isagu ahaa afayeenka ugu horreeya kalfadhiga koowaad, ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay shirka. “Bartilmaameedkayaga sanadka 2023 waa inaan yareyno saamiga wadada wadarta gaadiidka si loogu weeciyo gaadiidka tareenka inta ugu badan ee suuragalka ah, sidaas darteedna aan ku badinno hababka gaadiidka iyadoo lagu dhiirigelinayo gaadiidka isku dhafan, sidaa darteed waxaan isku dayeynaa inaan culeyska wadada ku wareejino noocyo kale, Bir Birdal ayaa yiri. Wuxuu sheegay inuusan fursad u helin guul. Birdal, ilaa sano 2023 in line la bartilmaameed dhoofinta Turkey ee sannadihii la soo dhaafay waxay muujiyeen horumar deg deg ah oo logistics, ayaa sheegay in tan iyo dardargelinta lala beegsaday.
Emre Eldener, Gudoomiyaha Gudiga Agaasimayaasha ee UTİKAD, wuxuu dhexdhexaadiyay fadhigii ugu horeeyey ee ku saabsanaa dhaqaalaha Pazar Turkish, Suuqyada cusub, Istiraatiijiyadaha Gaadiidka iyo Rajooyinka laga helay waaxda Saadka. Guddoomiye Ku-xigeenka UTIKAD iyo Golaha Business DEIK Logistics Turgut Erkeskin ah "Point Turkey ee taas Freight Maritime Transport, Fursadaha iyo Caqabadaha" samaynaya UTIKAD xisaddan daadihinayey iyo Guddiga TÜRKLİM Member Ibraahim Dölen, ka qayb afhayeenka a at isla kal fadhiga. UTIKAD Madaxweynihii hore ee Costa Rica iyo FIATA sharafeedka Member of seebab ah "Turkiga ee Railway Strategy hadda Xaaladda, Dhibaatooyinka iyo Solutions" taas oo uu si toos ah fadhiga ka wada hadleen.
JAWAABAHA PARALLEL OO LAGU HELO INTEREST
Marka lagu daro fadhiyada gaadiidka, kal-fadhiyada isbarbar dhiga halkaas oo waaxda dhabta ah iyo waaxda lojistikada ay wadaagaan oo horumarka hadda jira iyo rajooyinka la wadaago, Qalabka Khatarta iyo Kiimikada iyo ADR, Tafaariiqda iyo Qaybinta Saadka, Saadka Cunnada iyo Qaboojinta Saadka, Mashruuca, Culayska culus iyo Saadka Awoodda Tamarta, Dharka iyo Dharka Diyaar-garowga Saadka, Gawaarida iyo Alaab-qeybiyeyaasha Wershadaha Soo Saara, Saadka Saadka e-Ganacsiga
Casho sharaftii iyo xafladii abaalmarinta ee la qabtay shirkii kadib, shirkado badan oo UTİKAD ah ayaa sidoo kale la guddoonsiiyay. Sertrans International Transport Trade Inc., oo ka mid ah shirkadaha xubnaha ka ah UTİKAD, ayaa helay abaalmarinta 'Logistics Company of the Year ödül abaalmarinta, halka Ekol Logistics A.Ş. Maamulaha guud ee Ahmet Muuse ayaa ku guuleystay abaalmarinta Lojistik Logistics ganacsadaha ee sanadka ödül. UsesDO Istanbul Basaska Wershadaha iyo Ganacsiga Inc. Lojistik logistics Friendly Institution Saaxiibka sanadka ee abaalmarinta ödül, Barsan Global Lojistik A.Ş. waxaa la siiyay abaalmarinta Lojistik Logistics Beyond Borders ödül.
Konsped International Transportation Ltd. STI. Mete Tirman, aasaasaha iyo Maareeyaha Guud, oo xubin hore uga ahaa guddiga UTİKAD, ayaa sidoo kale la guddoonsiiyay "Yaşam Lifetime Logistics Award Ödül". Wuxuu abaal marintiisa ka helay gudoomiyihii hore ee UTİKAD iyo xubin xubin sharaf ah FIATA Kosta Sandalcı.
warshadaha Saadka ee Turkey
Magazine Logistics UTA